Rafitra fanaraha-maso kalitao | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Miezaka ny tsara indrindra izahay mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra azo antoka sy ny fanamboarana an-tsokosoko. Avy amin'ny famolavolana, ny famokarana, ny fikarohana hatrany amin'ny fitantanana, dia manatanteraka fifehezana matihanina amin'ny dingana tsirairay izahay sy ny dingana tsirairay araka ny fenitra sy fenitra ISO9001: 2000.
Fanaraha-maso ny fahaiza-manao kalitao
Nandritra ny folo taona mahery, mifantoka amin'ny kalitao foana izahay. Mampihatra fifehezana kalitao araka ny fenitry ny rafitra fitantanana kalitao ISO13485 sy fitaovana fitsaboana GMP izahay. Manomboka amin'ny akora, ny fizotry ny famokarana ka hatramin'ny entana vita, voafehy tsara ny kalitao amin'ny dingana rehetra. Ny olona fitsapana matihanina sy ny fitaovana fanandramana tonga lafatra dia manakiana ny fanaraha-maso kalitao azo antoka, fa ny fahatsapana andraikitra avy amin'ny ekipa kalitao - ny mpiambina ny kalitaon'ny vokatra - no tena zava-dehibe kokoa.
Fanaraha-maso ny fahaiza-manao
Ny kalitao tsara dia avy amin'ny fampiharana amin'ny famokarana tsara. Ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra milina dia tsy ny fitaovana mandroso ihany no ilana izany, fa ny fizotrany ara-dalàna sy ny fiasa mahazatra mba hampihenana ny fiovan'ny fizotrany sy hitazomana ny fitoniana. Ny ekipan'ny famokarana voaofana tsara dia manara-maso hatrany ny fizotry ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra, manao fanitsiana ara-potoana arakaraka ny fanovana, ary manome antoka ny famokarana milamina.
Fitaovana, fanapahana & fanaraha-maso
Ny fanavaozana ny fitaovana dia fomba iray lehibe amin'ny fanavaozana ny teknolojia. Ny fitaovan'ny haino aman-jery CNC dia nampitombo ny fahombiazan'ny famokarana, ary ny tena zava-dehibe dia ny fampitomboana ny mari-pahaizana amin'ny famaritana ny milina. Ny soavaly tsara dia tokony nasiana lasely tsara. Mampiasa mpanapaka namboarina manokana avy amin'ny marika anatiny sy iraisam-pirenena izahay izay voasoratra anarana amin'ny rafitra fitantanana mpamatsy anay aorian'ny fanamarinana. Novidiana avy amin'ny mpanamboatra manokana ny fanapahana ary ampiasaina eo ambanin'ny fitsipiky ny fifehezana ny ain'ny serivisy, ny fanoloana aloha ary ny fisorohana ny tsy fahombiazana mba hiantohana ny fametrahana mazava tsara ny milina sy ny fitoniana eo amin'ny kalitao tsy tapaka. Ambonin'izany, menaka fanosotra diloilo sy coolant ranoka ampiharina mba hanatsarana ny machinability, hampihena ny fiantraikan'ny milina amin'ny fitaovana, ary hanatsara ny kalitaon'ny vokatra. Ireto menaka manitra sy coolant ranon-javatra ireto dia tsy misy loto, maloto madio ary tsy misy residual.
Ny vokatray dia natao hampihenana ny faharetan'ny asa, ary ny tahan'ny taolana ho an'ny olon-dehibe manodidina ny 60% dia anisan'ny tsara indrindra any Shina. Izahay dia natokana ho an'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny vokatra anatomika nandritra ny folo taona mahery, ary ny vokatra dia mizara ho isan-karazany arakaraka ny taolana taolan'ny olona amin'ny faritra samihafa. Ireo teknisiana manana traikefa am-polotaona maro dia mitarika ny fizotrany manontolo manomboka amin'ny fisafidianana fitaovana, fanodinana ary famokarana fitaovana ka hatramin'ny famoriana sy ny fametrahana azy. Ny andiam-pitaovana tsirairay dia asiana marika ID mifandraika amin'ny vokatra sasany, mba hahazoana antoka fa tsy miovaova amin'ny fanodinana vokatra.